Gacan-Ku-Dhiigleyaal Lagu Qisaasay Magaalada Jilib Ee G/Jubbada Dhexe - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Gacan-Ku-Dhiigleyaal Lagu Qisaasay Magaalada Jilib Ee G/Jubbada Dhexe
Gacan-Ku-Dhiigleyaal Lagu Qisaasay Magaalada Jilib Ee G/Jubbada Dhexe
Kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan Magaalada Jilib iyo deggaannada ku dhow ayaa gelinkii dambe ee maanta isugu yimi Fagaare lagu magacaabo Macallin Aadan Xaashi Ceyroow halkaas oo Xarakada Al-Shabaab ay dadka ugu iclaamisay in uu ka dhacayo xad ka mid ah Xuduudda Allaah.
Xukunkan oo ahaa mid Qisaas ah Waxaa sida ay wararku sheegayaan lagu fuliyay Laba Ruux oo lagu kala magacaabo Gaabow Yare Ibraahim oo 36 Sano jir ah iyo Maxamed Bashiir Cabdi oo 29 Sano jir ah, kuwaas oo sida ay maxkamaddu sheegtay dhawaan dil u geystay nin Xoolo dhaqata ah oo lagu magacaabi jiray Guudle Caddaan Xasan.
Marxuumkan ayaa sida lagu warramayo gacan-ku-dhiiglayaashani ku dileen Baadiyaha Deggaanka Gal-Sheekh Abiikar oo hoos-taga Degmada Jilib ee Jubbooyinka.
Ugu horreyn fagaaraha waxaa kalimaad ka jeediyay mid ka mid ah culima’udiinka Xarakada Al-Shabaab isagoo dadka u bayaaniyay fadliga ku jira fulinta xuduudda Allaah iyo sida ay uga cadhoonayaan buu yidhi shisheeyaha kusoo duullay dalka Soomaaliya.
Ugu dambeyn Garsooraha Maxkamadda Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyinka ayaa fagaaraha ka akhriyay xukunkan qisaasta ah ee lagu fuliyay labadaasi ruux ee gacan-ku-dhiiglayaasha ah.
Gobollo dhaca Koonfurta iyo badhtamaha Dalka Soomaaliya oo ay ka jiraan maamullo Islaami ah ayaa lagu soo rogay ku-dhaqanka Shareecada Islaamka oo dadku ay ku heleen Ammaan iyo kala dambeyn buuxda.